बीबीसी साझा सवालमा रोल्पाली जीवन ः एक चर्चा
Created on Tuesday, 13 February 2018 11:52
नन्द घर्ती मगर ,रोल्पा
२०७४ पौष २ गते कान्तिपुर टिभीवाट बीबीसी साझा सवाल अङ्क ५२४ रोल्पाली जीवन प्रसारण भयो । रोल्पाको कुना कन्दराको सामाजिक जीवन र त्यसमा खेलिरहेको राजनीति उत्खनन गरी इलेक्ट्रोनिक मिडियावाट सार्वजनिक गर्ने साहस बीबीसी साझा सवालले ग–यो । यो आफैमा घतलाग्दो मननीय छ जो नेपालको सत्ताधारीवर्गले यसलाई जवरजस्ती दबाएर लुकाई छिपाई राखेको थियो ।
रोल्पाजस्तो भू–सामाजिक अवस्थितिलाई कुनै शक्तिले नियाल्यो र त्यसमा खेल्ने काम ग–यो । कम्युनिष्ट पार्टीको आवरणमा गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य गरी जम्मा ५ निर्देशक सिद्धान्त तय भयो । रोल्पाका बर्षमानदेखि सवैभन्दा तल सामान्य कार्यकर्ता तहसम्म यहि निर्देशक सिद्धान्त घोक्न लगाइयो । भ्mवाट्ट हेर्दा मिठो पनि उत्तिनै छ । यहि प्राप्तिको लागि १० वर्षे जनयुद्ध पनि चलाउन लगाइयो । कैयन मान्छेहरुको सहादत भयो । ०६३ पछि त्यो जनयुद्धको अध्याय समाप्त भयो । नयाँ अध्यायमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रारम्भ भयो । तर, यी दुवै अध्यायले रोल्पाली जीवनलाई तताउन सकेन, फत्रक्क गलाउन सकेन । तताउन र गलाउन नसकेपछि सामाजिक जीवनले गतिशिलता पाउन सकेन, जहाँको तँहि रहिरह्यो । वरफजस्तो जमिरहेको रोल्पाली सामाजिक जीवन बीबीसी साझा सवाल अंक ५२४ ले उजागर गरिदिएपछि अव लुकाउने वा छिपाउने कुनै ठाउँ रहेन ।
भौतिक र मानवीय विकास यी दुई भिन्न कुरा होलान । यो कुरा वुभ्mन मान्छेको ऐतिहासिक भौतिकवादलाई खोतल्न जरुरी छ । हामी कविला समाजको कुरा गर्छौं । यो कविलाले आफ्नो समुदायले स्वीकारेको लाज लाग्ने अङ्ग कुनै वस्त्रले छोप्न त सक्ला तर त्योभन्दा अगाडि नबढेको हुनसक्छ । जसलाई हामी जनजाती भन्छौं त्यो समुदाय समाजको आकार ग्रहण नगरेको हुनसक्छ । मान्छेको विभिन्न अङ्गहरुमध्ये नाक पनि एक हो । नाकले शरीरको स्वभायमान दिनका लागि मात्र होइन यसको धर्म गन्ध थाहा पाउने पनि हो । तर, नाकले गन्ध थाहा पाएनभने त्यो अपुरो नै हो । जनजाती यहि अवस्थामा हुनसक्छ जसले सत्ताको गन्ध थाहा पाउन सकेको छैन । जसलाई हामी राष्ट्रियता भन्छौं त्यो समाजले सामाजिक जीवन रुपान्तरणको लागि शक्तिको सहारा खोज्छ । चित्त नदुख्नु वा कुनै माग नराख्नुमा रोल्पाली जीवन राष्ट्रियतामा नपुगेको सहजै ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
कविलामा रहेको रोल्पाली जीवनलाई राष्ट्रियताको सिढी टेक्न न द्धन्द्ध पीडित राहतले सहयोग पु–याउँछ न सांसद बर्षमान पुनले वचनवद्ध गरेको टिनको छानाले । ती सवै भ्रमजाल हुन । भ्रमजाल जहिले पनि गुलियो हुन्छ । यो उसको धर्म हो ।
के कम्युनिष्टले रटान गर्दैआएको गाँस, बास, कपासले रोल्पाली जीवनलाई राष्ट्रियताको गुण दिनसक्छ ? अथवा त्यहाँ पुग्न वल पु–याउँछ ? राष्ट्रियता र गाँस, बास, कपासमा को जेठा हो ? गाँस, बास, कपासलाई पहिलो शर्त ठान्नु टाउकोले हिड्न लगाएको वरावरको शर्त हो । राष्ट्रियताले गाँस, बास, कपास जुटाउन भरमग्दुर बल पु–याउछ । युरोपका मुलुकहरु जो आर्थिक रुपमा समृद्ध छन तिनीहरुको विकास राष्ट्रियतामा पुगेपछि मात्र सम्वभ भएको हो । इतिहासमा ती देशले कति त्याग ग–यो होला । ती देशका जनताले गाँस, बास, कपास खाएर अघाएपछि बचेको नेपालजस्तो देशलाई एनजीओ वा आइएनजिओवाट पठाउछन । सवैभन्दा लाजमर्दो कुरा यहि हो ।
तसर्थ पहिलो कुरा, रोल्पाली जीवनलाई वाटोघाटो, टिनको छानाको एजेण्डा उठाएर उसको विकासमा भाँजो हाल्ने र दास वनाउने अभियान तुरुन्त वन्द गरौं । दोश्रो कुरा, राष्ट्रियतामा पुग्ने र पु–याउने महान वाटोमा हिड्ने विकल्पको खोजी गरौं ।
१६ पौष २०७४
२०७४ पौष २ गते कान्तिपुर टिभीवाट बीबीसी साझा सवाल अङ्क ५२४ रोल्पाली जीवन प्रसारण भयो ।
रोल्पाको कुना कन्दराको सामाजिक जीवन र त्यसमा खेलिरहेको राजनीति उत्खनन गरी इलेक्ट्रोनिक मिडियावाट सार्वजनिक गर्ने साहस बीबीसी साझा सवालले ग–यो । यो आफैमा घतलाग्दो मननीय छ जो नेपालको सत्ताधारीवर्गले यसलाई जवरजस्ती दबाएर लुकाई छिपाई राखेको थियो ।
राजनीतिक क्रान्तिको नाममा मङ्गले र फर्की वुढाको छोरा भुवन वुढाको सहादत भएको छ । छोराको मृत्युले मृतकका वुवाआमा जो अहिले वृद्धावस्था छन उनीहरुको चित्त दुखेको प्रकट हुदैन । १० वर्षे सशस्त्र द्धन्द्धमा देश फस्यो । ०६३ पछि त्यो द्धन्द्ध निभ्दै जाने दिशातर्फ गयो । ०७२ ले नयाँ संविधान दियो । यो वीचको उथलपुथलवारे ती मङ्गले र फर्की बेखवर छन ।
मान्छे जन्मेपछि त्यो प्रारम्भमा बालक वन्छ । बालक एक अवस्था हो । बालक अवस्था त्यहि रहिरहन्न । बालकको युग त्यागेपछि उ कुनैबेला विवाह गर्ने आँट आउने अवस्थामा पुग्छ । यो जीव विज्ञान हो ।
साझा सवालमा रोल्पाली जीवन टिभीवाट प्रसारण भइरहँदा जेलबाङका मङ्गले वुढाजस्ता खास पात्रको चित्त नदुख्नु, वदलिदो परिवेशवाट आफु बेखवर हुनु, भविष्य तय नहुनु, कुरा नवुभ्mनु देखाप–यो । यो सामाजिक विज्ञान हो ।
रोल्पाजस्तो भू–सामाजिक अवस्थितिलाई कुनै शक्तिले नियाल्यो र त्यसमा खेल्ने काम ग–यो । कम्युनिष्ट पार्टीको आवरणमा गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य गरी जम्मा ५ निर्देशक सिद्धान्त तय भयो । रोल्पाका बर्षमानदेखि तल सामान्य कार्यकर्ता तहसम्म यहि निर्देशक सिद्धान्त घोक्न लगाइयो । भ्mवाट्ट हेर्दा मिठो पनि उत्तिनै छ । यहि प्राप्तिको लागि १० वर्षे जनयुद्ध पनि चलाउन लगाइयो । ०६३ पछि त्यो जनयुद्धको अध्याय समाप्त भयो । नयाँ अध्यायमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रारम्भ भयो । तर, यी दुवै अध्यायले रोल्पाली जीवनलाई तताउन सकेन, फत्रक्क गलाउन सकेन । तताउन र गलाउन नसकेपछि सामाजिक जीवनले गतिशिलता पाउन सकेन, जहाँको तँहि रहिरह्यो । वरफजस्तो जमिरहेको रोल्पाली सामाजिक जीवन बीबीसी साझा सवाल अंक ५२४ ले उजागर गरिदियो । अव लुकाउने वा छिपाउने कुनै ठाउँ रहेन ।
भौतिक र मानवीय विकास यी दुई भिन्न कुरा होलान । यो कुरा वुभ्mन मान्छेको ऐतिहासिक भौतिकवादलाई खोतल्न जरुरी छ । हामी कविला समाजको कुरा गर्छौं । यो कविलाले आफ्नो समुदायले स्वीकारेको लाज लाग्ने अङ्ग कुनै वस्त्रले छोप्न त सक्ला तर त्योभन्दा अगाडि नबढेको हुनसक्छ । जसलाई हामी जनजाती भन्छौं त्यो समुदाय समाजको आकार ग्रहण नगरेको हुनसक्छ । मान्छेको विभिन्न अङ्गहरुमध्ये नाक पनि एक हो । नाकले शरीरको स्वभायमान दिनका लागि मात्र होइन यसको धर्म गन्ध थाहा पाउने पनि हो । तर, नाकले गन्ध थाहा पाएनभने त्यो अधुरो नै हो । जनजाती यहि अवस्थामा हुनसक्छ । जसलाई हामी राष्ट्रियता भन्छौं त्यो समाजले सामाजिक जीवन रुपान्तरणको लागि शक्तिको सहारा खोज्छ । चित्त नदुख्नु वा कुनै माग नराख्नुमा रोल्पाली जीवन राष्ट्रियतामा नपुगेको सहजै ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
के कम्युनिष्टले रटान गर्दैआएको गाँस, बास, कपासले राष्ट्रियताको गुण दिनसक्छ ? त्यो कदापि हुने कुरा होइन । यस्तो महान वाटोमा हिड्ने विकल्पको खोजी गरौं ।
सामाजिक जीवनलाई ठिक ढंगले वुभ्mन नसक्नु । सामाजिक जीवनलाई रुपान्तरण गर्न राजनीतिक वाटो पहिल्याउन नसक्नु सहज वनाउने कुरा नवुभ्mनु सामाजिक र राजनीतिक विज्ञानको योग होला ।
युग त २१ औं शताव्दी भन्छौं तर यो युगलाई पकड्न सक्ने हाम्रो सामाजिक र राजनीतिक जीवन छ या छैन ?